Ndeapi matsva eNFT akaunganidzwa ari kuuya muna 2022? - Cazoo
musha » musha » Ndeapi matsva eNFT akaunganidzwa ari kuuya muna 2022?
Tag: Cazoo NFT, NFT, nft.cazoo.it, Asina fungible tokeni
Mhinduro iri nyore, Cazoo inopa!
nft.cazoo.it akaberekwa mukutanga kwa2022 nekukumbira kwenharaunda pachayo, iyo yakawedzera kutora zvikumbiro zvekubatana uye zvikumbiro zvekugadzirwa kwenharaunda kwemapurojekiti. Ndeipi nzira iri nani yekuongorora nyika yeNon-Fungible Tokens, inozivikanwa zviri nani seNFT, pamwe chete?
Asi ndiani anofanira kunge ari muimbi anogadzira aya edhijitari mabasa ehunyanzvi? Imwe mhinduro iri nyore: tese. Ngativei nechokwadi chekusarudza hunhu pamwe chete, hwakavhoterwa nevazhinji, uye rega nzvimbo yepakati yenyika ino inoshamisa yedhijitari: tekinoroji kuigadzira.
Kusiyana nezvinofungwa nevakawanda, kushandiswa kweArtificial Intelligence munyika yehunyanzvi hakudi kutevedzera muimbi pachake uye kuvanza kuvepo kwake. Kwete, ndine chokwadi chekuti AI pachinzvimbo inoita kuti hunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi huwanikwe kune chero munhu, kunyangwe kune avo vasingazvione semaartist.
Cazoo inoda kuunza aya matekinoroji matsva kumunhu wese.
Isu tinorarama munguva iyo tekinoroji nehungwaru hwekugadzira hunogona kushandiswa mukugadzira zvakanyanya, kuchinjika uye nzira dzinoshanda.
Makombiyuta ari kukurumidza kukurumidza, akarurama, uye akapusa. Vanhu vanononoka zvisingaite, havana kururama uye vanopenya. Pamwe chete isimba risingafungidziriki.